अब ट्याक्सी खोज्न धाउन नपर्ने, ट्याक्सीमाण्डु एप सार्वजनिक – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अब ट्याक्सी खोज्न धाउन नपर्ने, ट्याक्सीमाण्डु एप सार्वजनिक
अब ट्याक्सी खोज्न धाउन नपर्ने, ट्याक्सीमाण्डु एप सार्वजनिक
काठमाडौं– तपाई ट्याक्सीको खोजीमा शहरका चोकचोक धाइरहनु भएको छ ? भने अव त्यसबाट मुक्त हुनुहास् । प्रविधीको प्रयोग गर्नुहोस् र ट्याक्सीको खोजी गर्नुहोस् । यसका लागि एक एप सार्वजनिक भएको छ ।
ट्याक्सीमाण्डु सर्भिस प्र्रालिले ‘ट्याक्सीमाण्डु एप’ सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्लो समय प्रविधिले फड्को मारेको छ । मानिसका हरेक काम प्रविधिले सहज बनाइदिएको छ । चाहे सपिङ गर्न होस् या अरु कुनै पनि कारोबार गर्न होस् विभिन्न एपहरुले त्यसलाई सजिलो गरिदिएको छ ।
पछिल्लो समय यात्रु्हरुको सहजताका लागि पनि विभिन्न एपहरु संचालनमा आएका छन् । जसले मानिसको दैनिक यात्रालाई सहज बनाएको छ ।
यस्तै एपहरुको भिडमा एउटा नयाँ एप सार्वजनिक गरिएको छ, ट्याक्सीमाण्डु । ‘फील सेफ राइड अन टाइम’ स्लोगनकासाथ संचालनमा ल्याइएको यो एप परम्परागत ट्याक्सी व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग गरी सहज रुपमा ट्याक्सी चालक र यात्रुबीच समन्वय गराउने उद्देश्यले संचालनमा ल्याइएको हो । यो एपको संचालनसँगै अब काठमाडौंका ट्याक्सीहरुको खोजी गर्न सहज हुनेछ ।
यसकालागि ट्याक्सी चालक र यात्रुहरुका लागि छुट्टा छुट्टै एप संचालनमा ल्याइएको छ । चालकले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गएर ट्याक्सीमाण्डु ड्राइभर र यात्रुले ट्याक्सीमाण्डु प्यासेन्जर नामक एप डाउनलोड गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै भिजिट नेपाल २०२० का लागि पनि ट्याक्सीमाण्डु एपले पूर्णरुपमा सहयोग पुग्ने संचालकले बताएका छन् ।
उपत्यका आउने अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले ट्याक्सीको प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसका लागि ट्याक्सीमाण्डु भरपर्दो माध्यम बन्ने एपका संचालक स्वीटी टि. खत्रीले जानकारी दिए ।
चालक र यात्रु दुवैको सुरक्षा
यो एप सुरक्षाका दृष्टिकोणले एकदमै संवेदनशील रहेको छ । यो एपको प्रयोगबाट ट्याक्सीमा हुन सक्ने सम्भावित अपराधको घटनामा नियन्त्रण गर्न सकिने संचालक स्वीटीले बताइन् ।
यस एपमा दर्ता हुने ट्याक्सी चालक र यात्रुहरुको नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा फोन नम्बरसहितको सम्पूर्ण अभिलेख राखिन्छ’ उनले भनिन्, ‘यसले चालक वा यात्रुहरुबाट हुनसक्ने गैर कृयाकलापको अनुगमन गर्न र नियन्त्रणमा लिन प्रशासनलाईसमेत सहज हुन्छ ।’
‘हामीले चालकको सेवा सुविधाका लागि ह्याम्स अस्पताल र इसेवासँग पनि सम्झौता गरेका छौं’ उनले भने ‘सम्झौताअनुसार ट्याक्सीमाण्डुमा दर्ता हुने चालकहरुले ह्याम्स अस्पतालमा उपचारमा १० प्रतिशत र औषधी खरिदमा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।’
त्यस्तै यो एपको प्रयोग गर्ने चालक र यात्रुले इसेवाबाट पे गर्दा ५ प्रतिशत क्यासब्याक पाउने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै एक महिनामा धेरै यात्रु बोक्ने ट्याक्सीलाई पेट्रोल हालिदिने र वर्षमा धेरै यात्रु बोक्ने ट्याक्सीको कर तिरीदिने प्रबन्ध निर्देशक केशीले बताए ।
अभिषेकसँग विबाह अघि यि पुरुषले ऐश्वर्यालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन्थे
भर्खरै मलेसियामा बाट आयो खुसीको खबर पुरा हेर्नुहोस
लकडाउन कै बीच सरकारले खोल्ने भयो यी क्षेत्र